पण्डितले ‘नाइँ’ भनेपछि... - मनोरञ्जन - नेपाल
पण्डितले ‘नाइँ’ भनेपछि...
हिरोइन शिल्पा पोखरेल र निर्माता छविराज ओझाबीच विवाह नहोला भन्ने सन्देह रहेन । किनभने दुवैले विवाहका लागि तम्तयार रहेको बताउँदै आएका छन्, खुल्लमखुल्ला । शिल्पा त छविसँगको सम्बन्धका बारेमा बोल्न अझ उत्साही हुन्छिन् । आखिर आफैँलाई डेब्यू गराएका निर्माता न परे ! मंगलम् फिल्म त उनीहरूले मिलेर नै बनाएका हुन् । त्यसो भए विवाह कहिले ? शिल्पा मुस्कुराउँदै भन्छिन्, “पण्डितले अहिले विवाह नगर्नु भन्नुभएको छ ।” बच्चादेखि मान्ने पण्डित भएकाले कुरा काट्न नसकेको उनको दुखेसो छ । केही समय ढिला हुँदा पनि बिग्रने केही होइन तर छविको ढल्कँदो उमेरतिर पनि ख्याल गर्ने हो कि शिल्पाजी ?